Afaka misy olona manampy ahy hanosika mpivarotra any amin'ny toerana hafa?
fanontaniana Afaka misy olona manampy ahy hanosika mpivarotra any amin'ny toerana hafa?
1 taona 4 volana lasa izay - 1 taona 4 volana lasa izay #1046 by jinx
Ny rakitra dia ao amin'ny flightsim.com anarana bige_ai.zip.
Te hampandeha ny mpandrindra ny Channel English ho any amin'ireo toerana 4 any amin'ny rano grika aho ary afaka manome ny kôlôriny - toerana iray no ho any Sipra, ny iray hafa ny 3 amin'ny rano grika.
Ny fanampiana rehetra dia ho ankasitrahana.
Last edit: 1 taona 4 volana lasa izay jinx.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: jdm601
Fotoana mamorona pejy: 0.194 segondra